Ny fitaomana mampidi-doza amin'ny fisorohana ny tranonkala sosialy | Martech Zone
Zoma 26 Novambra 2010 Asabotsy, Septambra 26, 2015 Douglas Karr
Nieritreritra ny hanome anarana ity lahatsoratra ity aho, Maninona no diso i Jonathan Salem Baskin… Fa tena miombon-kevitra aminy amin'ny lafiny maro amin'ny lahatsorany aho, Ny fisarika mampidi-doza amin'ny tranonkala sosialy. Manaiky aho, ohatra, fa matetika ny mpampianatra haino aman-jery sosialy dia manandrana manosika ireo orinasa hanararaotra ny haino aman-jery nefa tsy azoko tsara ny kolontsaina na ny loharano ao amin'ilay orinasa iarahany. Tsy tokony hahagaga anefa izany. Miezaka mivarotra vokatra izy ireo… ny consulting-n'izy ireo manokana!
Tsy mitovy hevitra amin'izany aho Andriamatoa Baskin amin'ny teboka roa, na izany aza:
Ny teny fitarihana mampidi-doza manetsika sary mahatsiravina amin'ny tranonkala sosialy manimba orinasa iray. Ny tena izy dia, raha tsy miasa amina orinasa eo ambany fifehezana henjana ianao, ny firesahana sy ny fihainoana ny mpanjifanao dia tsy dia mampatahotra azy. Raha ny tena izy dia antenaina sy ankasitrahana tokoa. Raha misy amin'ny fifaneraserana izay tsy misy anao ny fifaninanana… ny valiny afaka manimba. Ireo orinasa manana ny enti-manana sy ny fizotrany hitantanana ny lazany an-tserasera sy hikirakira ny fifandraisana dia nahita ny tranonkala sosialy mahomby sy mahomby amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny olan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ka hatramin'ny manangana fahefana eo amin'ny sehatry ny orinasa.
The tranonkala sosialy dia nanova ny zava-drehetra… Mihoatra ny tian'ny mpivarotra ekena. Ny filazana fa tsy mitovy dia tsy hitoviana amin'ny filazana fa tsy nisy fiatraikany tamin'ny revolisiona indostrialy ny sindika. Rehefa dinihina tokoa, ny tsipika famokarana, ny vokatra, ny fitantanana ary ny asa dia mbola teo daholo, sa tsy izany? Marina… fa ny sendika kosa dia manome hery ny mpiasa hiantraika amin'ny fitantanana sy ny karama. Ny sendikan'ny mpiasa dia mety hanangana orinasa iray…. Io no mitovy amin'ny tranonkala sosialy. Ny orinasa dia efa mitsambikina amin'ny fifaninanana amin'ny alàlan'ny fampiharana fomba fanao ara-tsosialy; ny hafa kosa mihemotra any aoriana. Ny fanambarana raha tsy izany dia tsy tompon'andraikitra.
Andriamatoa Baskin firenena:
Ny olona dia efa nifampiresaka momba ny marika. Talohan'ny internet dia nisy vondrom-piarahamonina jeografia, asa, fanabeazana, fivavahana ary vondrona vondrom-piarahamonina marobe izay angamba tsy dia malalaka sy mamiratra kokoa noho ireo izay misy amin'ny Internet, fa kosa lalina kokoa sy maharitra. Ny asan'izy ireo dia azo antoka fa tanana kokoa ary ny valiny dia famaritana fomba fiaina kokoa. Tsy miavaka amin'ny teknolojia ny fihetsika ara-tsosialy; fotsiny ny fahitantsika ampahany amin'ny lafiny sasany amin'ny fomba ifampiresahan'ny olona ankehitriny, noho izany dia te-hanainga na handray anjara amin'ireo hetsika ireo izahay.
Eny, marina izany… fa ny tena olana dia nanjary ampahany amin'ireo resaka ireo izao ny firaketana ampahibemaso. Afaka atao index, voarindra ary hita ao anaty motera fikarohana izy ireo afaka segondra vitsy. Ary ny be sy ny maro dia mifantoka bebe kokoa amin'ireo fanehoan-kevitra ratsy sy fanamarihana izay angonin'ny orinasa iray. Ny filaharana tsy tanterahina amin'ny fikirakirana olan'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny lazan'ny orinasa iray izay tsy mbola nataony taloha.
Tsy mahazo miery ao ambadiky ny sary famantarana, teny filamatra ary «jingle» mahafinaritra ny mpivarotra… terena ny mpivarotra hifampiresaka mivantana amin'ny besinimaro. Niresaka fotsiny izahay… fa tsy maintsy mihaino sy mamaly. Tsy misy valiny amin'ity tontolon'ny fiaraha-monina ity izay mitovy amin'ny tsy firaharahianao ny mpanjifanao. Ireo mpivarotra dia tsy niomana tsara amin'izany… ary mikely aina hianatra ny fitantanana fanoherana, ny tambajotra ary ny fahaizana hafa mihoatra ny fianarany sy ny zavatra niainany.
Ny fiantraikany amin'ny orinasa dia tena izy. Miady varotra mitady loharanon-karena ireo orinasa hanaronana ny ezaka ilaina hanaraha-maso sy hamaly ny tranonkala sosialy. Ity dia olana iray hafa izay tsy azoko mpampianatra media sosialy. Izy ireo dia manao ambanin-javatra ny loharanom-pahalalana takiana amin'ny famoahana ampy, ny famaliana haingana, ary ny fampivoarana ireo dingana ilaina amin'ny fampiasana tanteraka ny tranonkala sosialy.
Ka, rehefa manaiky aho ny gurus manao asa ratsy amin'ny mpanatanteraka amin'ny fanomanana azy ireo amin'ny tranonkala sosialy, mino aho fa mampidi-doza lavitra kokoa ny fisorohana ny tranonkala sosialy.
Tags: jonathan salem baskinasa sosialymandainga ny media sosialytranonkala sosialy
Valin'ny fanadihadiana momba ny orinasa madinidinika Facebook